Nke a bụ otu esi enyere migraine aka na lemon - SANTE PLUS MAG - TELES RELAY
Kwa ụbọchị, mpụga nwere ike ime ka ndụ anyị sie ike. Ọgba aghara, anya isi, na isi ọwụwa bụcha ihe mgbaàmà a na - ahụkarị nwere ike ịdịgide, ma anyị agaghị eme ya. Mgbe ọ na-adịghị ala ala, migraine na-aghọ ezigbo ibu, tinyere ihe mgbu na-egbu mgbu. Ngwọta sitere n'okike dị na nnu pink Himalayan na lemon e dere ede ga-enyere gị aka ịkwụsị ya. Bugharịa na uru ya.
Onye isi Facebook "nwere obi ụtọ ịkwụ ụtụ isi karịa na Europe"